“Macquul ma’ahan inaad ‘maya’ ku dhahdo Conor” – Jose Mourinho oo McGregor kula kulmaya Rome – Gool FM
(Rome) 17 Okt 2021. Feeryahanka shirkadda UFC ee ciyaaraha MMA ayaa fasax ku qaadanaya dalka Taliyaaniga isagoo magaalada Rome ee caasimadda dalkaas kula kulmay tababaraha kooxda AS Roma ee Jose Mourinho oo ay halkaas cabitaan ku wada qaataan.
Labada nin ayaa ku wada caweeyay caasimadda Taliyaaniga iyadoo ay halkaas ku wada cabaan khamriga whiskey ee ay shirkadda McGregor sameyso kaasoo loogu yeero Proper Twelve Whiskey, waxaana ay wada galeen sawirro xilli uu macallinka reer Portugal funaanadda Giallorossi ku guddoonsiiyay halkaas.
“Conor McGregor-ka weyn ayaa ku sugan Rome, waana ii farxad inaan la kulmo, sheekooyin la qaato iyo inaan u bandhigo funaanadda kooxda ugu maaliyadda qurxoon magaalada taasoo ah AS Roma” ayuu bartiisa Instagramo kusoo qoray Mourinho oo soo raaciyay sawir uu kula jiro horyaalkii hore ee UFC.
“Way adagtahay inaad ‘maya’ ku dhahdo Conor, sidaas darteed waxaan isku dayay khamrada Proper Twelve. Halyey” ayuu sii raaciyay.
Feeryahanka reer Ireland ayaa fasax iyo damaashaad ku qaadanaya caasimadda Italy halkaas oo ay ku wehliyaan qoyskiisa iyo waardiyeyaashiisa waxaana uu watqi ku qaadanayaa meelo muhiim u ah Rome.